by Krishna KC | Updated: 11 Feb 2020
नेपाली काँग्रेसको ईतिहास अजम्वरी छ त्यसमा कसैले संका गर्ने हिम्मत गर्योभने आंफै पङ्गु हुने काम हो। यदि कॉंग्रेसले नचाहेको भए राणा, पंचायत, राजा फाल्नु सहज थिएन। बन्दुक बोकेर एक दशकसम्म आन्दोलनको नाममा त्रास फैल्याएर सत्तामा आउन सफल भएकाहरूसंग खुकुरी नचाएर त्रास फैल्याउनेहरू मिलेपछि देशले काया फेर्छ भन्ने ठानेका बर्तमान अरिङ्गालहरूको त के चर्चागर्नु र? आकासतिर फर्कियर थुक्नेकाम आजै नगरौं।
ईतिहास एउटा बितिसकेको सत्य हो। बर्तमानलाई ईतिहासले केहि मार्गदर्शन गर्नसक्छ तर इतिहास आफैले बर्तमानको बाटो भने कोर्दैन, कोर्न पनि सक्दैन। ईतिहास जस्तो समय र परिस्थिती स्तिर बस्दैन। मेरो हजुबुबा मुखिया थिय भन्दैमा मेरो हैसीयत त्यही हुनेभयो कांग्रेसमा लगायत वर्तमान नेपाली राजनीतिमा।
हिजो आफैले गलत काम गर्न सिकायकाहरूले आज आफूमाथिनै कानुनको प्रयोग गरेको कसरी खपोस् बिचरा कॉंग्रेस। केही कुराहरूले कानुनका प्रयोगकर्ताहरू माथि शंकागर्ने ठाउँ प्रसस्त छन्। तर त्यसमा काँग्रेसको बिरोधको शैलीले संसदलाई बन्धी बनाएन र ? संसदको महत्त्वको बारेमा काँग्रेसलाई अरूले सिकाऊन पर्ला र ?
हुनत केही काँग्रेसीहरू कुर्लेको देखिन्छ। गच्छदारलाई बचाउन हैन अक्तियारको पक्षपाती कदमको बिरोधमा। हाम्रो आन्दोलन भनेर भनिएपनि त्यसले दिने नतिजा भनेको भ्रष्टलाई जोगाउने नै हो। हिजो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त गर्ने समयमा पैसाको बिटो लियर राजनैतिक नियुक्तीको प्रथा बसाउने बेला किन नसोचेको त?
आफूले पालेको साँपले आफैंलाई र आफ्नो कुकुरले पराईलाई टोक्छ। त्यहि भयो आहीले। आफूले गरेको साँप रुपी प्रथाले आफैंलाइ र विपक्षले पनि आफैंलाइ टोक्यो। सरकारले बनायको अदुअआ प्रमुखले कम्यूनिष्टलाइ नजोगायर कॉंग्रेसलाई जोगाउँछ त? अक्तियारको बिरोध गर्नुथियो त के कुरेर बसेको आजसम्म ? देशमा कति काण्डहरूछन्, नसुल्झेका त्यसमा छानबिन गर्न दबाब दिनेगरी हिजो किन नगरेको आन्दोलन ? किन नगरेको संसद अबरुद्ध ? आज गच्छदारलाई मुद्दालाग्यो भनेर किन नाटक गरेको ?
भित्रीकुरो काँग्रेसको चित्तदुखाई अक्तियारसँग हैन, सरकारसँग हो। हिजो खानेबेला भागबण्डा गरेर मिलेर खाने अनि आज मुद्द हामीलाई मात्र लगाउने भनेर दुखेसो पोखेको मात्र हो।
कानूनी राज्य हो भने कानून सबैलाई बराबर हुनुपर्छ। आक्तियारको अनुसन्धान दुराशयपूर्ण भय त्यसको पनि कानुनी उपचार पक्कै छ। त्यता ध्यानदिन छोडेर सयौं विधयकहरूलाई अलपत्र पार्ने गरी संसद अबरुद्ध गर्नु कांग्रेसका केहि व्यक्तिको स्वार्थहितमा होला पार्टी र जनहितमा पक्कै छैन।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस ओवानो छ भने पक्षपाती कदमको बिरोधको नाटकमा हैन वाईडवडी काण्ड, सुनकाण्ड जस्ता सयौ अरू काण्डहरूमा अनुसन्धान गरेर दोसीलाई कार्यवाही गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। छ तपाँईमा यो हिम्मत ? हैन भने हिजो गरेको संघर्षको ब्याज खाँदै घटिया नाटक गरेर काँग्रेसको अलिकती भएको साख पनि नगिराउनु, भोली ईतिहासले तपाँईको मुखमा थुक्ने छ।
अब पुग्यो, यो १९५० ताकाको जस्तो सताब्दी पुरानो नाटक आधुनिक स्मार्ट समयमा मन्चन गर्नु छैन। बरु बुद्धि र राजनीति स्मार्ट तरिकाले चलाउने सक्दा मुलुक र पार्टी अनि नयाँ राजनैतिक पिढीले पनि केहि मौका पाउला।